China SMD5050 IP65 LED မီးအလင်းရောင်အပြင်ဘက်အလင်းထောင့်ကွက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - DiGuang
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > LED မီး Box ကိုအလင်းရောင် > နောက်ခံအလင်းရောင် > SMD5050 IP65 သည်အပြင်ဘက်အလင်း Box အတွက် Backlit Light ဖြစ်သည်
High quality SMD5050 IP65 သည်အပြင်ဘက်အလင်း Box အတွက် Backlit Light ဖြစ်သည် is available in stock with fast delivery service. SMD5050 diffuse reflection LED, high lighting efficiency LED chip with unique designed PMMA Lens reflect light, glows up to 175° when light source through the lens, it can achieve uniform light highlighting effect and be away from ribs asaresult. We are expecting become your long-term LED backlit light supplier in China.
9pcs SMD3030 LED, စိတ်ကြိုက်
730 x ကို 17 x ကို 1.0
၁။ အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်မြင့်မားသောတောက်ပသော SANA AN LED ကိုအပူခံနိုင်ရည်နိမ့်ခြင်း၊ မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်များ၊
3. SMD5050 IP65 သည်အပြင်ဘက်အလင်း Box အတွက် Backlit Light ဖြစ်သည်, Low power consumption, high brightness;
၇။ ၆ မှ ၂၀ စင်တီမီတာအတွင်းအပြင်အဆင်ထည်အလင်းသေတ္တာအတွက်အကောင်းဆုံး။
1. ၆ - ၂၀ စင်တီမီတာအထူရှိပြင်ပ LED နောက်ခံထည်အလင်းသေတ္တာ
၂။ ထည်ထည်မီးပွိုင့်အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သော၊ စတိုးဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ မြေအောက်ရထား၊
Diguang LED is one of professional SMD5050 IP65 သည်အပြင်ဘက်အလင်း Box အတွက် Backlit Light ဖြစ်သည် manufacturers. We have already cooperated with world wide customer and most of them located in Europe, North America and Mid-east. We have 10 years experience with the LED Backlit Lattice Strip andasales team.
Diguang LED သည်လာမည့်နှစ်တွင်မည်သည့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်လာမည်နည်း။
Diguang LED သည်နောက်ဆုံးပေါ် LED နည်းပညာတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုမြှုပ်နှံထားသည်။ တည်ထောင်ပြီးကတည်းက LED ကြော်ငြာမီးအသစ်များကိုသုတေသနပြုခြင်းကိုဘယ်တော့မှရပ်ဆိုင်းမည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအပတ်စဉ်သတင်းများကိုကြေငြာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မေးလ်စာရင်းတွင်စာရင်းသွင်းပြီးသောအခါသင်သတင်းရယူနိုင်သည်။
hot Tags:: SMD5050 IP65 LED အပြင်ဘက်အလင်း Box အတွက် Backlit Light, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, တရုတ်, စျေးပေါ, စျေးလျှော့, စျေး, စျေး, အရည်အသွေး, အကြမ်းခံ